Italiana irery ankizivavy sy ankizilahy - Hihaona lonesome tokan-tena any Italia-ny
Italiana irery ankizivavy sy ankizilahy — Hihaona lonesome tokan-tena any Italia-ny
Aho avy Bonze (Italia), ary nianatra tany Aotrisy. Efa maro ny tombontsoa sy foana aho hanokatra mba hanandrana zava-baovao. Mahita izao tontolo izao sy ny fivoriana vaovao, mahaliana ny olona no zava-dehibe ho ahy. Amin’izao fotoana izao nisafidy ny toerana. Tiako ny vehivavy tsara eo amin’ny fiainako, izay nanambady ahy ary manana ny tsara ny ankizy eo amin’ny fiainana. Tiako ny milalao lalao, toy ny baolina kitra sy ny fianarana ny teny. Miarahaba, anarako no Paolo, izaho no tsara. Teraka tao Roma, fa izaho niaina taona maro tany ETAZONIA, ka dia manana ny zom-pirenena roa. Vao haingana aho no nifindra tany miverina any Roma, ary izany fotoana izany aho mihevitra ny hijanona.
Salama tsara daholo ny rehetra ny anarako no maso vaovao no ilaina mba hihaona ny namana manerana izao tontolo izao l toy ny olona iray izay afaka mino azy tamin’ny fotoana ela, ny fifandraisana fa dia nahoana aho no mandre ny fanambadiana. Tena mandroso ny fahaizana voajanahary sy matanjaka toetra.
Tsy miankina sy ny mpisava lalana
Ny fanajana ny hevitry ny hafa sy ny tena namana tsara Isam-bolana, an’arivony irery ny zazavavy avy any Italia hahita ny iray, ary afa-tsy amin’ny Fitiavana mifohaza. Ny mampiaraka toerana tolotra maro isan-karazany asa ho an’ny ankizivavy. Izy ireo dia mandroso ny fikarohana, tsy voafetra ny taratasy fifanakalozana sy mifampiresaka, free sary ity sy ny SMS finday manadala ankizilahy. Tia mifoha mbola hanatsarana ny fomba mpikambana mihaona ny andriana, ny daty sy ny raiki-pitia. Raha ianao no namonjy anay, ianao efa nanao ny safidy tsara.
Ny nofinofiko fotsiny dia mety ho tsindry
← Italia fivoriana
Ahoana no Hahafantatra ny Ankizivavy: Dingana (Sary) →